मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेर प्रेमी अपागं भएपछि जोयाले के सम्म भोग्नु परेन ? भिडियो सहित « Light Nepal
मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेर प्रेमी अपागं भएपछि जोयाले के सम्म भोग्नु परेन ? भिडियो सहित
लाइट नेपाल काठमाडौँ । हिजोआज प्रेमको परिभाषा फेरिएको छ । प्रेमीहरु प्रेमका नाममा शारीरिक आर्कषणमा लिप्त भइरहेका बेला जोया यस्ति प्रेमीकाका रुपमा देखा परेकी छिन् । जसले आफ्ना प्रेमीलाई सुखमा मात्रै नभई दुखमा पनि साथ दिएर वास्तविक प्रेमको नमुना बनेकी छिन् ।
ओएसनेपालको युट्युब च्यानल मार्फत रिलिज गरिएको केबल तिमीलाई बोलको गीतका माध्यमबाट अनिष र जोयाले सफल प्रेमीका रुपमा भूमिका निर्वाह गरेका छन् । स्वर, शब्द र संगीत रायन कार्कीको रहेको गीतमा संगीत संयोज उज्जवल र संजयको रहेको छ ।
खुश्बु एल्बममा समावेश यो गीतको छायांकन उत्सब दाहालले गरेका छन् भने सम्पादन प्रविन श्रेष्ठले गरेका छन् । रायन कार्कीले नै निर्देशन गरेको भिडियोमाले प्रेम गर्नेहरु हरेकका लागी सकारात्मक सोच्न र सच्चा प्रेम गर्न आग्रह गरेको छ ।